Maxaa kala haysta Sacuudiga iyo Sweden! | Somaliska
Xiriirka u dhexeeya Sacuudiga iyo Sweden ayaa isbuucyadii la soo dhaafay aad u xumaaday ka dib markii ay wasiirka arimaha dibada Sweden Margot Wallström ay cambaareysay xaalada xuquuqda bani'aadamka ee ka jidha wadankaasi isla markaana ay ku tilmaamtay mid diktatoori ah oo ku shaqeeya dastuur qadiimi ah. Dowlada Sacuudiga ayaa hadalkaas aad uga carootay iyagoo u diiday wasiirka arimaha dibada in ay ka hadasho kulankii jaamacada Carabta. Sweden ayaa diidmadaas ugu jawaabtay in ay ka bexeen heshiis milatari oo ay kula jireen Sacuudiga muddo 5 sano ah. Heshiiskaas ayaa Sacuudiga ay Sweden uga iibsanayeen hub iyo qalab kale oo ciidan. Sacuudiga ayaa uga jawaabay in ay u yeertaan safiirkooda u fadhiyay Stockholm isla markaana ay joojiyaan dhamaan viisooyinka ganacsiga ee ay siinayeen ganacsatada Swedishka ah. Arintaas ayaa Swedishku aad uga xumaadeen maadaama Sacuudiga uu yahay wadan uu xiriir ganacsi oo balaaran kala dhexeeyo Sweden isla markaana shirkado badan ay ku qasaarayaan. Sacuudiga intaas ugama harin Sweden, ee waxa uu abaabulay dhamaan wadamada carabta iyo Muslimiinta, isagoo ka dhaadhiciyay in wasiirka arimaha dibada Sweden ay aflagaadeysay shareecada Islaamka. Taasi ayaa keentay in ay guud ahaan wadamada Carabta iyo wadamo kale oo Muslim ah ay cambaareeyaan Sweden. Xitaa Imaaraatka Carabta ayaa u yeertay safiirkooda. Sweden ayaa hada ka cabsi qabta in dadka Muslimiinta ah laga dhaadhiciyo in dowlada Sweden ay islaamka aflagaadeysay oo taasi ay keento mudaharaadyo iyo weeraro ka dhan ah Sweden. Quburada siyaasada ayaa ku tilmaamay ficilada Sacuudiga in ay yihiin mid ay ku isticmaalayaan awoodooda dhaqaale iyo diimeed, iyagoo doonaya in Sweden ay jilbaha dhulka u dhigaan. Dhinaca kale, waxay sheegeen in wasiirka arimaha dibada Sweden ay ku fududaatay arinta Sacuudiga oo aysan filayn in Sacuudigu ay si kulul uga jawaabayaan hadalkeeda. Xitaa boqorka Sweden oo sida caadiga ah ay mamnuuc ka tahay in uu soo fara galiyo arimaha siyaasada ayaa shaaciyay in uu dhexdhexaadinayo dowlada Sweden iyo boqortooyada Sacuudiga. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay dhacdo in Muslimiintu ka soo horjeestaan Sweden, iyagoo taageeraya Sacuudiga ayay taasi noqonaysaa mid lagu qaldamay maadaama arintaan ay tahay dano siyaadeed oo keliya, isla markaana aysan wax lug ah ku lahayn diinta. Cambaareynta Sweden ayaa ah mid ku wajahan dhaqamada Sacuudiga ee ka soo horjeeda xuquuqda bani'aadamka balse aysan ahayn weerar ka dhan ah Islaamka iyo Muslimiinta. Inkastoo la dhihi karo dowlada Sweden waa labo wajiile, maadaama ay hubka ka iibiyaan wadamo kale oo aan waxba dhaamin Sacuudiga isla markaana ku tunta xuquuqda bani'aadamka.
Maxaa kala haysta Sacuudiga iyo Sweden!
Xiriirka u dhexeeya Sacuudiga iyo Sweden ayaa isbuucyadii la soo dhaafay aad u xumaaday ka dib markii ay wasiirka arimaha dibada Sweden Margot Wallström ay cambaareysay xaalada xuquuqda bani’aadamka ee ka jidha wadankaasi isla markaana ay ku tilmaamtay mid diktatoori ah oo ku shaqeeya dastuur qadiimi ah.
Dowlada Sacuudiga ayaa hadalkaas aad uga carootay iyagoo u diiday wasiirka arimaha dibada in ay ka hadasho kulankii jaamacada Carabta. Sweden ayaa diidmadaas ugu jawaabtay in ay ka bexeen heshiis milatari oo ay kula jireen Sacuudiga muddo 5 sano ah. Heshiiskaas ayaa Sacuudiga ay Sweden uga iibsanayeen hub iyo qalab kale oo ciidan.
Sacuudiga ayaa uga jawaabay in ay u yeertaan safiirkooda u fadhiyay Stockholm isla markaana ay joojiyaan dhamaan viisooyinka ganacsiga ee ay siinayeen ganacsatada Swedishka ah. Arintaas ayaa Swedishku aad uga xumaadeen maadaama Sacuudiga uu yahay wadan uu xiriir ganacsi oo balaaran kala dhexeeyo Sweden isla markaana shirkado badan ay ku qasaarayaan.
Sacuudiga intaas ugama harin Sweden, ee waxa uu abaabulay dhamaan wadamada carabta iyo Muslimiinta, isagoo ka dhaadhiciyay in wasiirka arimaha dibada Sweden ay aflagaadeysay shareecada Islaamka. Taasi ayaa keentay in ay guud ahaan wadamada Carabta iyo wadamo kale oo Muslim ah ay cambaareeyaan Sweden. Xitaa Imaaraatka Carabta ayaa u yeertay safiirkooda.
Sweden ayaa hada ka cabsi qabta in dadka Muslimiinta ah laga dhaadhiciyo in dowlada Sweden ay islaamka aflagaadeysay oo taasi ay keento mudaharaadyo iyo weeraro ka dhan ah Sweden. Quburada siyaasada ayaa ku tilmaamay ficilada Sacuudiga in ay yihiin mid ay ku isticmaalayaan awoodooda dhaqaale iyo diimeed, iyagoo doonaya in Sweden ay jilbaha dhulka u dhigaan. Dhinaca kale, waxay sheegeen in wasiirka arimaha dibada Sweden ay ku fududaatay arinta Sacuudiga oo aysan filayn in Sacuudigu ay si kulul uga jawaabayaan hadalkeeda. Xitaa boqorka Sweden oo sida caadiga ah ay mamnuuc ka tahay in uu soo fara galiyo arimaha siyaasada ayaa shaaciyay in uu dhexdhexaadinayo dowlada Sweden iyo boqortooyada Sacuudiga.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay dhacdo in Muslimiintu ka soo horjeestaan Sweden, iyagoo taageeraya Sacuudiga ayay taasi noqonaysaa mid lagu qaldamay maadaama arintaan ay tahay dano siyaadeed oo keliya, isla markaana aysan wax lug ah ku lahayn diinta. Cambaareynta Sweden ayaa ah mid ku wajahan dhaqamada Sacuudiga ee ka soo horjeeda xuquuqda bani’aadamka balse aysan ahayn weerar ka dhan ah Islaamka iyo Muslimiinta. Inkastoo la dhihi karo dowlada Sweden waa labo wajiile, maadaama ay hubka ka iibiyaan wadamo kale oo aan waxba dhaamin Sacuudiga isla markaana ku tunta xuquuqda bani’aadamka.
“Sidaad iila dhaqantahay, hooyadaa ula dhaqmi maayo”
Natiijada doorashada Sweden – LIVE
wlh waa les hayaa Alle hakala qabojiyo
FIFA A´Sweden.. Wadan ka Saudi Arabia ayaa ah wadan aan ka jirin wax la dhoho ( Mänskliga rättighet ) ama Human rights weena ku saxsantahay in ka hadasho Sweden.
Waxan yab leh nin gal ha kudho walal kaga hadilan wax xun mahan wax jiira sheektay ma benba saudi wa wadan digtori wasx vii sveriga
asc asxbay aniga waxay ila tahay in sweden gardaran tahay waxay dad ku qabsanayasa human rights ka ayay kutuntaan saudi ayaga maka roonyihiin sweden ayagaaba ku tumanaaya waxaas yaan niila sheegin sweden diinta ayay waxa ka sheegtay waa run haday human right kahadalayan waad aragteen dad badan oo web kaan soo gala ee dumar iyo rag leh ee ka cabnaya in caruurtoodee lala mideen waayay dhoor sanao kala maqan yihiin bina aadinimada ay sweden sheeganeeso wadan kale ayay aramihiisa daaqiligaa ayay fara gashatay waana qalad in qof kale gurigiisa suu ugu noolanayo loo sheego
Fikrad lala dhacay 16 2
Sweden waxay jilaysaa film aysan tabar u heyn,waxay rabeen in heshiiskii hubka sacdugia uga baxaan sidaas darteed ayay xuquuq ibnu aadan marmarsiinyo ka dhiganayaan ,may kahadlan xuquuqda naagaha libya,syria ,iraq ,yeman oo sacudi deris la ah kuwaas xuquu ibnu aadan ma lahan miyaa ? naag baa gaari loo diiday inay wado markii meesha la imanayaan, mida kale kama aysan fekerin 250milyar ee kaso gasho sacudiga lknse arinta daran way inay ku tilmaamto sharciga islaamka “medeltiden”, Maka iyo Madiina may rabtaa in naagu isku qaawiyaan .iyo qabrigii nebigeena NNKH korkiisa. Hadana baryo ka taagan tahay yaa markale sacudi nala heshiisiiya
March 22, 2015 at 19:26
Mr Jimcaale mahadsanid lkn walaal arinkaani Diin ayuu salka ku haayaa.
Waxaana moodaa dooda Sweden iyo sacuudiga inaadan billaawgeeda la socon 2 qodob ayaa Sacuudiga ka caraysiiyay Swedena ku qaldaneed.
1 . xilliga Wasiirada Arimaha Sacuudiga dhaleecaysay waa xilligeey ku aadaneed xuquuqda Dumarka 8 Maarso. Taasna waxay Islaanta Swedhishka uga jeeday dumarka Xijaaban ee Sacuudiga.
2.Wiil Sacuudiyaana oo Sacuudigu xiray jeedal iyo xabsina isugu daray. Wiilkaasna gabadhbuu Sweden kula tuntay oo bloggiisa ayuu sawiro anshax xumaa soo geliyay.
Jimcaale arinkaan waa Arin Sweden Diinta ku qoonsatay! !!! May ka hadasho dumarka Hindidaa ee 20 ka nin lagu kufsaa haddeeysan Diin ahayn.
Sacuudiga waxuu tosay inaysan waxay ismoodeen ahayn. ..
al markaawi says:
March 22, 2015 at 22:17
sacudiya maxuu diintaa ugu soogabanaa waaba run waxaa lagasheegaayaa inuu kutunto bina adin nimada yaa islaamkaa lagu sogaban waa run waxay kasheektey iwiidan sxaabta maxaay tahay kafiil qof shaqsi adoo kale ah ku adoonsanaa maa beeen baa
waxaan dhihi lahaa anigu mahaboona in wadan aan wadaankaaga ahayn ladhaho waxaas ayaa kaa qaldan sacuudigu dantiisa waa yaqaan hadii uu yahay digtaatori ama domoraadi waa wadan isku filan dadkiisuna ku qanacsan yihiin waa ila qalad in wax laga sheego taasina waa fikirkayga
Waxaan idinka codsanayaa in aad wax iiga sheegtaaan ruux suga mudo dheer ilaa sanad iyo bilood aan wax jawaab maxaa lahaboon oo uu qaban karaaa
sacuudiga diin shuqul kuma laha isagaane diinta ku tumto marka sweden wax jiro ayey sheegtay xuquuq kama jirto waa wadan ku dhisan nolol kala sareyso hal qeys ayaa ka taliyo oo an cid kale waxba u ogoleyn naagta wasiirka ah wey saxsan tahay hadalkeeda sweden nooloow
bulshooy ma ila arag teyn sacudi diinta yaa uu ku ganban shacab ka sacuudi dada ka muslim ka ah waxa ey uu geystan walaahi ilmo aa ka imaane daad muslimo kuma daayan dowladooda xataa kama hadasho dhulka barakey san daad aa ku dhiban oo lagu dulmiya la dharbaxa la dilaa lacagta mushaar kooda loo diidaa
Sucuudiga wax ima siin waxana ka jecelahay sweden wa wadan ka dhaqaalo badan kana amni badan sucuudiga qoyska xakumo ayaana meeshan kaarsiiyay nolow nolow sucuudiga marka la arko yurub iyo wadamada fasahaadka KU nisan
March 23, 2015 at 19:05
War maxay tahay muslinimada sacud talaa hadhka caad ayaay sharaca hablaha uu qadamad taga ku fuulayaane iyaadon rafba la gadhin
asc waar ninka la yidhaahdo jimcaale maan fahmin hadalkiisa ma diinta aanu aqoon mise sucuudiga ayuu u haystaa inuu diin kale haysto sxb swedishka sidaa aad u jeceshay si maaha ee ilahay ka baq nin muslin ah ayaad tahee arintu sucuudi iyo waxaas maaha ee waa diintaada oo la aflagadeyay marka ay sharecada islaamka ku ledeahay waa fikirad qadiimi ah maxaad u fahan tay adigu .. teeda kale wadamada islaamka oo dhan ayaa canbaareyay waana xaq ee adigu sii fiican diitada u difaac ama waxa laguu soo qoro ku soo qor mesha
Jag undrande utrikesminister hon har inte pratat om dålig.det som finns på arabiska landet egentligen fanns rättigheter. Men hon inte pratat inte om religion eller fanns inte rättigheter på människan då hon tycker om allt samma rättigheter.
sacuudigu dhibaatada uu umada ku hayo waa la ogyahay somalida weey garaacaan sidii xoolihii (yaa xayawaan) ayeey dhahaan waad ogtihiin kuwa u danaaninaa xagee cuncuntay swedan waad la socotaan ineey ciyaal muslimiin ah aay quraanka baraan oo ka bixiyaan kirada dugsiga iyo mushaarka macalin, Taas miyaad beeni neeysaan?
Waa Yaab says:
Asc alla somaliga meel walbo ay joogto. Marka aan fikradeyga ka dhiibto aniga ahandeyda waxaan dhihi laha dowlada Soomaali waa ku qalad in ay so dhax gasho ayadon dadkeda meel aan ku ogeyn, Sudcudi arabi iyo sweden waxeey ku kala duban yihin Sucudiga waa kaligisa talis diktatur ah. Sweden shacabkoda ayaa taliiyo waa Demokrati. marka hadii la dhahay dadkaga u naxriiso ama waxeey raban u samey ma qaladba gaal ayaa sidaas dhahayo okej, adigiyo islam ah dalkiisa kuma hakan kartiid dalkaga dhiib uga i moow ama dagal sokeeyey uga i moow dalkaga hooyo, Swedena sharci ayey sineysa kuma lahan kan waa gaal kana islaam, waayo bahidada ayeey firineysa oo kaliya halka ay la egtahay ama dalkaga hooyo dhibka oo ku jiiro. okej adigon wax sharci wadan tag sucudiga siiba somalidena xabsi ayaa lagu taxabaya mesha ka i madey ayuu ku tarcii laya okej soo ma ihid islaam? sharci Yurub yahan ama USA wado ee dalkiisa tag ka dibna firi sidey kuma dhaqman iyo isku firi Sweden waxaas ayeey ku kala dubanyihin sucudiga dantiisa ayuu kugu wata oo kaliya marko dan leyahay ayaa ku dhahaya walalkeyga muslim wapilahi towfiq !